Khillfkii ka dhacay Cadaado oo si nabad ah loo xaliyey | Somalisan.com
Home Afsomali Khillfkii ka dhacay Cadaado oo si nabad ah loo xaliyey
Khillfkii ka dhacay Cadaado oo si nabad ah loo xaliyey
Caawa Fiidkii ayaa lagu soo waramay Ciidamo hubeesan uu watay Wasiirka Maaliyada Maamulka Galmudug Saciid Siyaad Shirwac in ay xoog ku galeen xarunta Madaxtooyada, waxaana halkaasi ka dhashay xiisad markii dambe la xaliyay.
Dhinaca kale Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug oo la hadlay saxaafada ayaa beeniyay in Cadaado caawa uu ka dhacay dagaal , waxa uuna warkaasi ku tilmaamay mid been abuur ah oo magaalada lagu khal khal galinayo.
Waxa uu sheegay Gudoomiyaha Baarlamaanka in uu hada joogo magaalada Cadaado xaalada ayna tahay mid degan oo dhibaato aysan ka jirin, waxa uuna uga digay dadka been faafinaya in aysan umada jahwareerin colaadna abuurin.
Xiisada Caawa laga dareemay magaalada Cadaado ayaa timid kadib markii Wasiirka Maaliyada Galmudug oo taageero ka heesta Madaxweyne Xaaf uu xirtay xarunta Madaxtooyada sidoo kale caawa xoog ku galeen ciidamo ka amar qaata.
Previous articleU codee enj Maxamed yaasiin oo buuxi meelaha maran
Next articleTaliyaha Ciidamada Xoogga dalka oo kormeer indha indheyn iyo xog wareysi ah ku gaaray goobihii askariga Mareynka ay alshabaab ku dileen
Warsaxaafadeed Xilka Qaadis iyo Magacaabid
259 oo dhintay iyagoo ku dadaalaya iney sawir fiican iska qaadaan
Somalisan News - October 6, 2018
Somalisan News - October 30, 2018